China Hunhu Kuruka, Bhatani, Bhegi YePurasitiki Quatation Uye Vatengesi - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Iyo kambani yakaunza anopfuura zana seti yemhando yepamusoro yemachira michina.
mashoko â – ¶
Isu tinopa yakakwira kushanda zvakanaka uye inoshanduka mhinduro yemitsara dzakasiyana vatengi kubva pasirese pasirese Uye uwane izvi.
Ngirozi yakazvipira kupfeka zvishongedzo zvakawandisa uye ese marudzi ezvishongedzo dhizaini, kuvandudza, kugadzira uye kutengesa.
Zvigadzirwa zvinonyanya kutengeswa muEurope nemusika weUnited States uye epamba mafekitori ekupfekedza nguo dzekunze, izvozvi mutero wepamwedzi unogona kusvika mamirioni matatu.
Crystal peya bhatani
Data mutsetse kurongedza bhokisi
Yakadhindwa Tissue Pepa
Pe epurasitiki bhegi
Nguo yehembe Yenguvo Co., Ltd.
Angel Garment Accessories Co, Ltd. inyanzvi kugadzirwa kwekukochekera, kusingasviki mapoka maviri; Usazviomesera, inelastic Ribbon, uye dzinenge chiuru mhando accessories zvigadzirwa kugadzirwa yepamusorosoro bhizinesi mabhizinesi. Yakave yakazvipira kune zvipfeko zvishongedzo zvakawandisa uye ese marudzi ese ezvishongedzo dhizaini, kuvandudza, kugadzira uye kutengesa. Kambani yedu inogona kuverengerwa zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi, senge kudhaya, zvigadzirwa zveRibhoni zvine kupokana kwechiedza, yakasimba tembiricha, kushomeka kwemvura, kupfeka kuramba, hakupera uye mamwe maitiro, zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mupfeko, shangu, ngowani, mabhegi, matoyi, mota, mabasa emaoko, zvekurapa nezvimwe maindasitiri sezvinhu zvekubatsira. Kambani yedu yakavambwa muna 2010, iri munyika inozivikanwa kugadzira guta - Dongguan. Nesimba rekubatana kwenhengo dzese dzekambani yedu, Angel Garment Chishongedzo chave chimwe cheakanakisa ehembe dzemidziyo vatengesi kumba uye kunze kwenyika.
Jacquard mushure mekuonekwa kweribhoni-mativi matatu akasarudzika, jacquard patani yakasimba yekukwesana, haina kumbobvira yakashanduka.Brand jacquard, logo inooneka zvakajeka, yakajeka ruvara, giredhi rakanyanya, haigone kuwedzera chete kuwedzera kuwedzerwa kwezvigadzirwa, Inogona zvakare kusimudzi...
heano maitiro maviri akakosha ekupenda marara emachira. Imwe ndiyo yekudyara yakanyanya kushandiswa (yakajairwa kudhaya), iyo inonyanya kurapa machira emachira mune mhinduro yemakemikari dhayi. Imwe nzira ndeyekushandisa pendi, iyo inogadzirwa kuita zvidiki zvisinganyungudiki zvine mavara kuti zvite...